8 Dukaamada BJ Boss | ThatsLuck.com
8 Decks BJ Boss: Maxaa Loogu Ciyaaraa Khadka Tooska ah?
Blackjack waa laga yaabaa inay tahay ciyaarta kaliya ee casino ee ficilada ciyaartoygu ay saameyn go'an ku yeelanayaan qaddarintiisa guusha, cMa taqaan kulan kale oo khamaar halka ay tani macquul ka tahay?
Xitaa haddii aadan aheyn qibrad khibrad leh, waad ku mahadsan tahay barnaamijka cusub 8 Dukaamada BJ Boss waxaad ka yareyn kartaa geeska guriga 5% ilaa 0.5%!
Thanks to software-kan cusub waxaad ogaan doontaa in ku-dhaqanka istiraatiijiyadda saxda ah ay tahay mid aad u fudud.
Kahor intaadan sii wadin xusuusnow taas ThatsLuck sidoo kale waxaad ka heli kartaa waxyaabo bilaash ah, haddii aad rabto inaad cusbooneysiiso qoraalada iska qor kanaalka ►YouTube.
8 Dukaamada BJ Boss: maxaa ku saabsan
Cayaarista bakhtiyaanasiibka aan caadiga ahayn ee rajada laga qabo in lagu garaaco 21 gacan kasta xaqiiqdii maahan fikrad wanaagsan, laakiin inta badan inta lagu jiro kal-fadhiga khadka tooska ah waxaad isla markiiba fahmi doontaa cidda si aan kala sooc lahayn u ciyaareysa, si fudud sababtoo ah ma dabaqaan istiraatiijiyadda aasaasiga ah.
Maaddaama ay jiraan fursado horumarineed, weligaa ha bilaabin ciyaar adiga oo aan ogeyn xulashada (tusaale ahaan haddii aad garaacdo ama istaagto) suurtagalnimada ugu sarreysa ee guuleysiga, xusuusnow haddii aad ciyaartid adigoon helin macluumaadkan, ganacsaduhu wuxuu yeelan doonaa faa'iido 5%, sidaa darteed fursadahaaga guuleysiga ayaa si weyn loo yareyn doonaa.
Dhab ahaan dareenkan 8 Dukaamada BJ Boss waxay noqon kartaa xalka ugu habboon, marka loo eego macnaha ay u dhigantaa istaraatiijiyada aasaasiga ah ee ugu fiican for kala duwanaansho Blackjack la 8 sagxad ah (illaa iyo inta ugu badan ee internetka ku baahsan) dhaqaajin dhaqaale oo ciyaartoygu dooran karo inuu isku dayo inuu ka koobnaado wejiyada xun ee ciyaarta, laakiin had iyo jeer ujeedku, si fiican u xusuusnow, si loo gaaro a Stopwin taas oo ay tahay in gabi ahaanba la dejiyo ka hor inta aan la bilaabin kulan kasta oo kulan ah.
Ku guuleysta khadka tooska ah leh 8 Dukaamada BJ Boss
Barnaamijkan cusub ee lagu guuleysto khadka tooska ah ee loo yaqaan 'Blackjack Blackjack' waa mid aad u fudud in la isticmaalo, aan ku dhigno sidan: haddii aadan waligaa waligaa isticmaalin istaraatijiyad sharad ka hor, iyadoo la adeegsanayo 8 Decks BJ Boss waxaad kaliya hagaajin kartaa ciyaartaada iyo wixii ka sarreeya dhammaan inta jeer ee kulammadaada guuleysta.
Ugu horreyntii, waxaan jeclaan lahaa inaan muujiyo taas anigoo hubinaya sheyga ku yaal dhinaca midigta kore Dusha Ka Saar waxaad si raaxo leh ugu hayn kartaa barnaamijka daaqada ciyaarta, sida aad sidoo kale ku arki karto muuqaalka bandhigga onYouTube.
Marka marka mid la dhiso Stopwin ka hor inta aan la bilaabin fadhiga, inta lagu guda jiro koorsada caadiga ah ee ciyaarta kaliya raac tilmaamaha miiska, si habboon loo habeeyay si loo yareeyo faa'iidada guriga ee kala duwanaanshaha Blackjack-ka ee laga bilaabo 5% ilaa 0,7%. 8 sagxad, meesha laga yaabo inaadan ogeyn, kaararka tirinta ayaa noqda wax aan faa'iido lahayn sababo la xiriira dhexgalka kabaha kaliya 50%.
4-ta kulan ee horumarka ah
Sida aad ku arki karto midigta barnaamijka, waxaad dooran kartaa inaad isticmaasho mid ka mid ah 4 dhaqaaleedka maaliyadeed ee la bixiyay, oo loogu talagalay in looga hortago wejiyada ugu adag ee ciyaarta, waa marka ganacsaduhu bilaabo inuu guuleysto xitaa haddii ciyaaryahanka uu leeyahay 20, ama xir 21, kiisaska sida aad arki doontaa ma aha dhif ah oo dhan nasiib daro.
Horumarka la bixiyay (marka laga reebo noocyada kala duwan ee 2 Bread Win) ayaa bixiya kororka suurtagalka ah ee sharadka kaliya marka ciyaaryahanka uu ku guuleysto gacanta, tani waa in la isku dayo in laga faa'iideysto isbeddellada wanaagsan halkii laga hortagi lahaa kuwa xun.
Horumarka la filayo waa:
Rooti guuleysta 3: waa qadiimiga Ku guuleystaha rootiga, maneuver si fiican u yaqaan gaar ahaan ciyaartoyda roulette, halkaas oo dhab ahaantii lagu dabaqo tallaabooyinka 5, (sida noocyada soo socda). Ficil ahaan, waxaad marwalba sharad ku dhigeysaa halbeeg, haddii aad lumiso 1 qaybood waxaad udhaqaaqeysaa inaad khamaariso 3 cutub illaa aad dib udhigto dhammaan khasaarihii oo aad guuleysato 2 cutub, haddii aad sidoo kale lumiso 1 qaybood oo dheeri ah (6 x 2 = 3) 6 cutub oo ku sii jira heerkaas saamiga ilaa dheelitirka taban si buuxda looga soo kabanayo. Si ka duwan noocyada caadiga ah ee 3-ta ah (Bread Win 5), adeegsiga kaliya 5 heer waxay u oggolaaneysaa dhakhso soo kabasho, in kastoo saamiyada ay u kori karaan isla markaaba sidoo kale.
Rooti guuleysta 5: Guuleystaha rootiga ee caadiga ah, oo leh qalliinka horey loogu soo sharaxay.
Vs D'Alembert: sidaan u qoray ka hor dhaqdhaqaaqyadan iskuday ka faa'iideyso isbeddellada wanaagsan, sidaa darteed waxaan u ciyaareynaa si sax ah ka soo horjeedka 'D'Alembert', markaa waxaan ku kordhineynaa sharadka 1 halbeeg kasta oo lagu guuleysto oo aan hoos u dhigno 1 halbeeg kasta oo lumay Sida iska cad, mar kasta oo aad hesho hal cutub oo ah guusha saafiga ah oo aad dib u soo ceshato wixii aad ka badisay, tirinta ayaa dib loo soo celinayaa.
Oscar shiidi: siyaabaha qaarkood waa ka aan ugu jeclahay, laakiin waxay u soo degtaa dhadhanka qofka. Hadafku waa iska cadahay guuleysto 1 cutub oo ku saabsan weerar kasta. Haddii sharad ka dib gacanta uu ku guuleysto ciyaaryahanka markaa weerarka ayaa la soo gabagabeynayaa, haddii halkii gacanta laga lumiyo waxaad sii wadi doontaa inaad ku ciyaarto sharad 1 cutub, laakiin isla marka aad ku guuleysato gacanta waxaad kordhineysaa saamiga 1 halbeeg, taas oo had iyo jeer Heer waliba gacan kasta oo luntay Asal ahaan haddii aad guuleysato waxaad kordhineysaa sharadkaaga, haddii aad lumiso waxaad had iyo jeer sharadaysaa tirada unugyada sharad ku jira tallaalkii hore. Sida iska cad horumarkaan waxaa loogu talagalay in uusan si aad ah u kordhinin sharadka wejiyada xun waxa xiisaha leh ayaa ah in xaalad kasta xitaa haddii ay tahay inaad sharad gasho tusaale ahaan 5 cutub, laakiin isku dheelitirka weerarka waa -2, sharadka lagu muujiyay 8 Dukaamada BJ Boss ma noqon doonto 5 cutub, laakiin kaliya 3, sidaa darteed haddii ay dhacdo guul guul weerarku wuu xidhan yahay +1 halbeeg, iyada oo aan khatar loo gelin in la kordhiyo dheelitirka taban oo aad u badan sidaa darteedna soo kabashada haddii ay dhacdo in gacanta lagu beddelo bangiga.
Markaad xulato manaafacaadka ku habboon qaabkaaga ciyaarta, guji badhanka Win o Lost iyada oo ku saleysan natiijada gacanta, 8 Dukaamada BJ Boss wuxuu si otomaatig ah u tusi doonaa tirada cutubyada looga dan leeyahay guddiga hoose (Next Bet U).
Waxaan ku xasuusinayaa maadaama aysan jirin xisaab xisaab gurigu leeyahay, inay lama huraan tahay in mid la dejiyo Joojinta maalinlaha ah tusaale ahaan 10 cutub, in haddii aad ku ciyaareyso miisaska 5 yuro (ama doolar), ay weli macnaheedu tahay inaad ku guuleysato 50 euro maalintii iyo xitaa inaad ku fekerto inaadan guuleysan maalin kasta, dhammaadka bisha malaha kuma jiri doonno Kariibiyaanka, laakiin xitaa kuma jiro nigiskeena!
Soo Degso Fayl	8DBJBoss.zip - 2 MB
Categorie blackjack Mawduuca marinta